lundi, 04 septembre 2017 22:32
Sambava: Ankizivavy 8 taona tra-tehaka nangalatra
Nihanika varavarankely ilay zazavavy raha iny variana miresaka any ivelan’ny trano sady maka rivotra iny ny tompontrano tao Analapenja Fokontany Antanifotsy 2 androany alatsinainy 04 septambra.
Nosavasavainy avokoa ny poketra sy kitapo, ka firavaka iray no hitany. Noraofiny koa dibera teo ambony latabatra.
Niditra tampoka anefa ny tompontrano dia akory ny hatairana nahita olona tao an-trano ka niantso vonjy fa misy mpangalatra.
lundi, 04 septembre 2017 18:52
Didier Ratsiraka: Salama tsara
"Mbola tsara ny Amiraly sy ny AREMA" hoy ny hafatra.
Fitsarana miaramila: Tsy nisy nandritra ny 8 taona
Tamin'ity taona ity indray vao nisy ny fitsarana miaramila teto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny korontana ny taona 2009 no tsy nisy intsony ny fitsarana miaramila noho ny tsy fisian'ny tetibola natokana ho an'izany izay natontona tany amin'ny fampandriana fahalemana avokoa raha ny fanazavana.
Anjaran'ny Distrikan'i Mahajanga I nanomboka androany 04 septambra 2017 ary aharitra 3 andro, mifarana ny alarobia izao.
Singa iray tsy maintsy ilaina amin'ny fikarakarana atontan-taratasy ny nanaovana fitsarana miaramila ka io no antony nanosika ireo tanora hanao izany raha nanontaniana.
Maherin'ny 200 ireo tonga teny amin'ny CEG Charles Renel ny maraina teo, izay andro nanombohana ny teto Mahajanga.
lundi, 04 septembre 2017 18:04
Tonga hamonjy fanasana: Niharan’ny daroka sy voaroba ilay rangahy
Tao Andamoty Avaratra, Kaominina Farahalana – Sambava no niseho ity tranga ity ny sabotsy 02 septambra 2017 teo. Tsy afaka ny olona tena nahazo fanasana izay any Antalaha fa nandefa solontena.
Nahiahiana ho mpitsikilo na koa mpanendaka io solontenan’ny mpampiasa azy io nony tonga tao amin’ilay lanonana, ka niharan’ny daroka sy vono tsy nisy alaharo nataona Ben’ny Tanàna.
Nifampisintomana ny kitapo babena teny amin’ilay rangahy solontena. Taorian’izay dia nosavaina teo imasom-bahoaka, ka valopin’ny fanasana nandoavana 60.000 Ariary izay nanirahana azy no tao anatiny sy vola taratasy.
lundi, 04 septembre 2017 14:48
Fianarantsoa: Zarina amin'ny lalao mampihetsika vatana sy mandalin-tsaina ny ankizy
Kilalao natao hitondra "éveil" na famohazan-tsain'ny kilonga eo amin'ny fanabeazana ny vitsily, fanorona, kifanga sy ireo hafa fanao taloha. Mihavery izany ankehitriny ka izany indrindra no antony nanatanterahana izao hetsika izao teto Fianarantsoa ny tolakandron'ny alahady 03 septambra.
Mikarakara ny hetsika ny fikambanana "Izay manao ro mahavita". Namaly ny antso ny ankizy 150 avy any amin'ny fokontany teto an-tanana.
Miisa 8 ny sokajy kilalao ifaninana dia ny kifanga, kisabaka, fanorona, kanety, vitsily, course gony, course kapisily ary jono tavoahangy.
Andiany voalohany izao tanterahina izao. Ny alahady 10 septambra no dingana famaranana.
lundi, 04 septembre 2017 14:46
Antalaha: Giazan’ny fanjakana ny volan’ny Kaominina
Misedra olana goavana ny Kaominina ambonivohitra Antalaha, Faritra SAVA rehefa nogiazan’ny Fanjakana efa ho enim-bolana izao ny volany any amin’ny Tahirimbolam-panjakana, izay tsy mazava amin’ny mpitantana sy ny mpiasa ny antony mazava mahatonga izany.
Misy fiantraikany amin’ny fampandehanana ny asan’ny Kaominina, ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa ary fandoavana ny volan'ireo mpandraharaha niasa ho an'ny Kaominina izany.